Black ကက Galaxy ကျောက်ကွက်များကောင်တာများတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ High Quality ပို့ကုန်အိန္ဒိယ
Black ကက Galaxy ကျောက်အိန္ဒိယကနေလူကြိုက်များအနက်ရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်သည် Galaxy ထဲမှာကြယ်တစ်ဦးကြည့်ပေးသောသေးငယ်တဲ့ရွှေငွေ flecks နဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အနက်ရောင်နောက်ခံရှိပါတယ်. ဒါဟာအစအဖြစ်ဟုခေါ်သည် ကြယ်ပွင့်က Galaxy နှမျးဖတျကြောကျ. ဤသည် Blackgranite primly မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအသုံးပြုသည်, မြို့ရိုးကိုအုပ်ကြွပ်အခင်းများနှင့်အလယ်ဗဟိုစားပွဲအောင်. မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးအနက်ရောင်ကျောက်၏ Itne. Flodeal မှာ, ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားသည်, စံအရည်အသွေးနှင့်ပရီမီယံအရည်အသွေးကွက်များ, လက္ကားစျေးနှုန်းများမှာအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်၏ပြားများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. ဒီသဘာဝကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ထုတ်ကုန်ပွတ်နှင့် honed ပြီးများတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်.
Black ကက Galaxy ကျောက် Andhra Pradesh ၏ Prakasam ခရိုင်အတွင်းရှိ Ongole အတွက်ကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ကျောက်ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးတွေလာ. ဒီက Black ကျောက်၏စျေးနှုန်းပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်အပြောင်းအလဲအပေါ်မူတည်. Black ကက Galaxy ကျောက်ကောင်တာများ, ပြားနှင့် 24×24, 12×12, 18×18 အုပ်ကြွပ်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူရရှိနိုင်ပါ.
ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ ကြယ်ပွင့်က Galaxy ကျောက်, Black က Galaxy
Black ကက Galaxy ကျောက်၏ပြား
ပြားများအပြင်, ငါတို့သည်လည်းကြွပ်စေသည်. Black ကက Galaxy ကျောက်၏ tiles အရွယ်အစားကိုအောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရရှိနိုင်ပါသည် :
ချိန်ညှိ 610x305x10 မီလီမီတာပွတ် BGPCT2412 (2412 ကျောက်ကွက်များ×)
ချိန်ညှိ 610x610x12 မီလီမီတာပွတ် BGPCT2424 (2424 ကျောက်ကွက်များ×)
BG PCT1212 စံကိုက်ညှိ 305x305x10 မီလီမီတာပွတ် (1212 ကျောက်ကွက်များ×)
BGPT60302 ပွတ်ကွက်များ 60x30x2 စင်တီမီတာ - အသင့်ဖြစ်ပြီလားစတော့အိတ်
BGPT60402 ပိုလန်ကွက်များ 60x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
BGPT40402 ပိုလန်ကွက်များ 40x40x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
BGPT60602 ပိုလန်ကွက်များ 60x60x2 စင်တီမီတာ - အမိန့်တွင်
ကျနော်တို့၏အထူနှင့်အတူ 18 "x18" ၏အုပ်ကြွပ်နှင့်အနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်အတွက် 400mm x ကို 400mm ချက်တွေကိုအုပ်ကြွပ်လည်းလုပ် 20 မီလီမီတာနှင့် 10 မီလီမီတာ. ၏နေသောအနက်ရောင်က Galaxy ကျောက်အတွက်ရရှိနိုင်စျေးပေါအုပ်ကြွပ်ရှိပါတယ် 1.8 အထူအတွက်စင်တီမီတာ. ဤရွေ့ကားကြွပ်ကြမ်းပြင်များနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များ. အဆိုပါလျော့နည်းစျေးနှုန်းအုပ်ကြွပ် 60x30x2 စင်တီမီတာရှိပါတယ်, ကသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားလုပ်ကွက်ကနေဖန်ဆင်းထားသည်. ရလဒ်အဖြစ်ကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေ. သင်နှင့်အတူဤကျောက် load နိုင်ပါတယ် Tan ကဘရောင်းကကျောက်, မွန်း White ကကျောက်, Jasmine White ကကျောက်နှင့် Black ကပုလဲကျောက်.
Black ကက Galaxy ကောင်တာများ
ထို့အပွငျ, ကျနော်တို့ကောင်တာများလည်းရှိ. ကောင်တာများရရှိနိုင်အရွယ်အစားကိုအောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်၏:
Black ကက Galaxy ကျောက်ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကောင်တာများ: Black ကက Galaxy မီးဖိုချောင်ကောင်တာများများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. ရွှေအစက်အပြောက်တွေနဲ့အမှောင်ထဲမှာ black color ကောင်တာများအဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဝန်ကြီးအဖွဲ့နှင့်အတူအလွန်လှပသောကြည့်ရှု. ဒါကမီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်များအတွက်ပါတဲ့လူသုံးအများဆုံးအရောင်များတစ်ခုဖြစ်တယ်.
အခင်း: Black ကက Galaxy ကျောက်၏ tiles ကြမ်းခင်းအောင်များအတွက်လူကြိုက်များ. အဆိုပါ2နဂါးငွေ့တန်းကျောက်၏စင်တီမီတာအထူအုပ်ကြွပ်အခင်းအဘို့အလူကြိုက်များ. လည်း, အဆိုပါနဂါးငွေ့တန်း၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားပြားကြီးတစ်ခုဧရိယာထဲမှာအခင်းအောင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဤသည် Indore ဒေသများရှိအခင်းတစ်ခုအကြံပြုအရောင်ဖြစ်ပါသည်.
လှေကား: ဒီကျောက်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အဆင့် Riser နင်းအလွန်လူကြိုက်များ. ပတ်ပတ်လည်အစွန်းများနှင့်စတုရန်းအစွန်းနှင့်အတူဤအတက်လှေကားများအပြင်အလွန်အသုံးပြုကြသည်. ဤရွေ့ကားခြေလှမ်းများ risers အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါ.
ဒါကအစိုင်အခဲလွင်ပြင်ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာအပြောင်းအလဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်နှင့်မူကွဲနှုန်းအဖြစ်, စျေးနှုန်းဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်နေကြတယ်. က Galaxy ကျောက်များ၏ကုန်ကြမ်းကို Block ထံမှ, တစ်ဦးမျက်နှာသစ်အရည်အသွေးကွာခြားချက်အထဲကရှာတွေ့ဘို့ကမဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်. သငျသညျကိုသာချောဇာတ်စင်ပြီးနောက်ဒီကျောက်ရဲ့အရည်အသွေးကိုအကြောင်းကိုစိတ်ကူးတစ်ခုရှိနိုင်ပါသည်. ကျနော်တို့ကအောက်ပါအတိုင်းက Galaxy ကျောက်စာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ် :
က Galaxy ဖြန့်ဖြူးခြင်းအားဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ခြားနားချက်
အညီအမျှ Distributed က Galaxy
ညီ Distributed က Galaxy
က Galaxy အတွက်လိုင်းများအကြားအရည်အသွေးကွာခြားချက်
မြင်နိုင်သည့် backside ကနေတစျခုက Black လိုင်း (mergeable လိုင်း)
အိမ်ရှေ့ကနေမြင်နိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုက Black Lines
က Galaxy ၏အရွယ်အစားအားဖြင့်အရည်အသွေးကွာခြားချက်
Big က Galaxy (ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်က Galaxy)
အလတ်စား Size ကိုက Galaxy
ဒါကခက်ခဲကျောက်နှင့်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ polishing ရရှိရှေ့မှာအရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးရန်အလွန်ခက်ခဲသည်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူက Galaxy ကျောက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုဝယ်နိုင်. ကျနော်တို့ကအောက်ပါအရည်အသွေးကိုစံချိန်စံညွှန်းများ.
အနိမ့်စျေးက Galaxy ကျောက်:- က Galaxy ကျောက်၏ဤအမျိုးအစားအဖြူရောင်နှင့်အနက်ရောင်လိုင်းရှိပါတယ်. ဒီပုံစံအတွက်က Galaxy ၏အရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြီးမားတဲ့နိုင်ပါတယ်နှင့်နဂါးငွေ့တန်းဖြန့်ဖြူးအညီအမျှဖြန့်ဝေသို့မဟုတ်ညီဖြန့်ဝေနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သငျသညျပြင်ပအခင်းသို့မဟုတ်ကောင်တာများအဘို့စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းအတွက်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီဖြစ်ကောင်းထိုကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများအတွက်များအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်.
အလတ်စားဈေးသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်:- ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်က Galaxy အကွာအဝေးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်မြင်နိုင်ဖြစ်နိုင်သည့်နှစ်ခုကိုအနက်ရောင်လိုင်းရှိပါတယ်. က Galaxy ကျောက်၏ဤအမျိုးအစားကြီးမားသောဧရိယာများအတွက်မီးဖိုချောင်ထိပ်နှင့်အခင်းအောင်များအတွက်လူကြိုက်များတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
Price မြင့်မားဖို့အလတ်စား:- မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းက Black က Galaxy ရန်အလတ်စားတစ်ခုတည်း Mergeable လိုင်းရှိပါတယ်, သောပစ္စည်းများ၏ backside ကနေမြင်နိုင်ပါသည်. က Galaxy ညီဖြန့်ဝေမည်အကြောင်း, သို့မဟုတ်ဒါဟာအညီအမျှတစ်ခုတည်းလိုင်းနှင့်အတူနဂါးငွေ့တန်းဖြန့်ဝေခဲ့ကြပေမည် (နောက်ကျောကနေမြင်နိုင်).
မြင့်မားသောစျေးနှုန်းစတားက Galaxy ကျောက်:- မြင့်မားသောစျေးနှုန်းက Galaxy ကျောက်ဆို line သို့မဟုတ်တွင်းရှိသည်ပါဘူး. ဤသည်ကျောက်စျေးကြီးသည်. က Galaxy စံနမူနာမညီမညာဖြစ်နေသောဖြစ်နိုင်သည်နှင့်နဂါးငွေ့တန်းများ၏အရွယ်အစားအလယ်အလတ်အရွယ်အစားဖြစ်နိုင်သည်. ဤသည်ကျောက်ကဒီပစ္စည်းရရှိမှုကောင်းမကောင်းထောက်ပံ့ရေးလိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်လည်းကတည်းကပထမဦးဆုံးအရည်အသွေးအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်ကဒီပစ္စည်းကောင်းတစ်ဦးထောက်ပံ့ရေးစေနိုင်သည်.
ပရီမီယံသီးသန့်:- အဆိုပါပရီမီယံသီးသန့်ကတော့စတားက Galaxy ၏ထိပ်ဆုံးအပိုအရည်အသွေး. ဤသည်ကျောက်ပုံထဲမှာ line ကိုမဆိုမျိုးရှိသည်ပါဘူး. လည်း, ဒီကျောက်ပုံထဲမှာ Big Size ကိုက Galaxy ရှိပါတယ်. ဒီအမရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပင်ဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ရရှိနိုင်မှုလျော့နည်းခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းအလွန်စျေးကြီးသည်.
သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အရည်အသွေးအကြောင်းပိုမိုသိရန် Black ကက Galaxy ကျောက်၏အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေး.
Black ကက Galaxy ကျောက်စျေး
က Galaxy ကျောက်စျေးနှုန်းအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်, အထူ, ပြီး. ဒါကလက္ကားပစ္စည်းဖြစ်ပြီးစျေးနှုန်းကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်. ဤသည်ကျောက် Ongole နေ, ဒါကြောင့်စျေးနှုန်းဘန်ဂလိုများတွင်စျေးနှုန်းထက်ကွဲပြားခြားနားသော Ongole ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်ကွက်များလုပ် Ongole အတွက်အထူးပြုစက်ရုံရှိ.
Black ကက Galaxy ကျောက်ပွတ်လုပ်နည်း?
၏ Polishing pad ပါသုံးပါ 30,50,100,200,400,800,1500,3000 နှင့် 5000 ကောင်းသောချောရဖို့ grit.
ထိုကဲ့သို့သော Tenex အဖြစ်အရည်အသွေးကို shiner ကိုသုံးပါ, ဒီကသင်၏ပစ္စည်း shinier စေမည်.
စတားက Galaxy ကျောက်ရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
Black ကက Galaxy ကျောက်ကိုတံဆိပ်ခတ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပါသလား?
5 ပေါ်အခြေခံကာ 23 မဲ